Apple Inoburitsa iOS 15.2 Beta 4 yeVagadziri | IPhone nhau
Apple Inoburitsa iOS 15.2 Beta 4 YeVagadziri
Vhiki mbiri mushure mekuburitswa kwechitatu Beta yeiris 15.2 uye iPadOS 15.2, Apple yakaburitsa yechina Beta, parizvino yevagadziri chete, ikozvino yave kuwanikwa kurodha kuburikidza neOTA.
Vaya vanogadzira vane iOS 15.2 Betas yakaiswa pamidziyo yavo vanogona ikozvino kurodha kuburikidza neOTA, kubva kune iyo terminal pachayo, yechina Beta yeiyi vhezheni. Iyi vhezheni nyowani inosanganisira zvakavanzika mishumo, sezvavakatiratidza mune yekupedzisira WWDC 2021, hunhu hunoita. tinogona kutarisa kuti ndeapi maapplication anowana ruzivo rwepachivande pane yedu kifaa, uye kuti vanozviita kakawanda sei, izvo zvinosanganisira ruzivo rwenzvimbo yedu, kushandiswa kwekamera, maikorofoni uye mameta. Isu tinopihwawo ruzivo rwekuti maapplication edu nemapeji ewebhu anosangana kupi, kuitira kuti tidzidze nezve zvese zvinoitwa nemaapps nemawebhu "kuseri kwemaketeni", uye nekwavari kutumira ruzivo rwedu.
Pamusoro peidzi sarudzo dzekuvanzika, matanho ekuchengetedza anosanganisirwa mumeseji application yevadiki vari mumba, uye kugadzirisa munhu anozokwanisa kuwana account yedu kana tafa. Dzimwe sarudzo dzakabatanidzwa mukuburitswa uku dzinosanganisira uChinhu chitsva mu "Tsvaga" application iyo inokutendera iwe kuti uwane zvishandiso zvinokutevera. Isu tinogona zvakare kuvanza email yedu mukati meiyo Email application, uye kune cosmetic shanduko muiyo iPad TV application, ine itsva sidebar inobvumira zvakanyanya kunanga kufamba.
Dzimwe shanduko sanganisira bhatani rekumisa kana kudzima Macro modhi mukati meCamera application, kuitira kuti isu tigone kudzora nemaoko shanduko yelens pa iPhone yedu kuitira kuti itarise zvakakwana pazvinhu zviri padyo. Ichi chimiro chave chichidiwa zvakanyanya nevashandisi, sezvo iyo macro modhi, iyo inobatsira zvakanyanya mune dzimwe nguva, mune dzimwe inotitadzisa kutora mafoto akanaka kana isu tisingadi kushandisa iyo modhi padhuze.
Yekupedzisira vhezheni yekuvandudza iyi inotarisirwa kusvika munguva pfupi., zvinofanotaurwa gore risati rapera. Parizvino inongowanikwa kune vanogadzira, ichakurumidza kusvika kune vashandisi vePublic Beta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Apple Inoburitsa iOS 15.2 Beta 4 YeVagadziri
Maitiro ekudzoreredza akadzimwa maapuro nemitambo kubva ku iPhone kana iPad